Shiinaha ahama Steel Fine Wire mesh -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha Da Shang
Warp and dhexroor silig weft sida caadiga ah waa isku mid.
Strongwaa ka badan tahay dhogor cad. Silig kasta oo weft ah ayaa si kale uga gudba laba, ka dibna laba fiilo oo dunsan. Twill weave waxaa badanaa loo isticmaalaa aqallafsan dhexroor silig ka culus kan caadiga ah oo lala xiriirinayo mesh la siiyay waxayna aad ugu sii xumaan kartaa cadaadiska farsamada.
Waxqabadka: oo leh iska caabin aad u fiican oo ka dhan ah aashitada, alkali, kuleylka iyo daxalka, xiisad xoog leh iyo iska caabinta abrasion wanaagsan, helitaanka adeegsiga ballaaran ee ka shaqeynta saliidaha, kiimikooyinka, cuntada, dawooyinka, sidoo kale kala soocidda iyo baaritaanka adag, dareeraha iyo gaaska miinada, macdanta, hawada sare, samaynta mashiinka, iwm.
Hore: Maro naxaas ah oo naxaas ah
Xiga: Phosphor Bronze Wire mesh